Manatreha ny oniversite namana miaramila sy miaramila »Hodges U
Ao an-trano na any ivelany, manohana ny miaramila izahay!
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia ho hitanao fa ny hoe Miaramila Miaramila dia tsy zavatra lazainay fotsiny fa haavon'ny fanohanana izay mihoatra lavitra ny efitrano fianarana. Manomboka amin'ny ivon-toerana veteranina natokana, toerana fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, programa manokana ary serivisy fanohanana mitohy, dia manome modely ny fanolorantenanay ho anao sy ny fianakavianao hatramin'ny fiatraikany voalohany hatrany amin'ny sehatra mpanatanteraka.
Ho fanampin'izany, dia nekena ho toy ny Sekolin'ny finamanana miaramila ho an'ny tafika volamena 2019-2020, 2018-2020 Miaramila tsara indrindra ho an'ny Vets College, Mpandray anjara amin'ny kofehy mavo, Alefaso 911 GI Bill® ary Sekolin'ny vady tia namana ho an'ny fanoloran-tenantsika hanatsara ny fiainan'ny Miaramila miasa, tranainy, ary Fianakaviana miaramila.
Hodges dia safidy tsara indrindra ho an'ny mpianatra miaramila sy veterana
Fandaharam-pampianarana misy aingam-panahy avy amin'ny mpiasa.
Mpandray anjara amin'ny kofehy mavo.
Fampianarana ho an'ny miaramila / miaramila taloha Ivotoerana veteranina natokana.
12 isan-jato an'ny mpianatra rehetra nanao raharaha miaramila.
Kilasy iray isam-bolana endrika mifantoka be loatra raha mamela Fisoratana anarana feno na tapa-potoana.
Fanamarinana voarakitra ao anatin'ny Fandaharam-pianarana.
30 Taona Manompo amin'ny fampianarana ambony mpianatra.
Fanohanana veteran ankoatry ny efitrano fianarana
Hodges University dia mirehareha amin'ireo mpianatra miaramila sy veterana ary hita izany. Manomboka amin'ny toeram-piantsonana voatendry ho an'ny miaramila ka hatrany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia mino izahay fa hanome atmosfera ahazoana aina ho an'ireo mpianatra miaramila sy veterana mandritra ny oniversite anay.
Ho fanampin'izay, manome serivisy fanampiana izahay, fanampiana amin'ny fizotran'ny fampiharana, fanampiana ara-bola vonjimaika ho an'ny veterana, ary fanampiana amin'ny famolavolana làlana ho an'ny fahombiazanao. Fantatray fa tsy mora foana ny fifindrana amin'ny miaramila mankany amin'ny mpianatra fa miaraka aminareo izahay isaky ny mandeha.
Fanohanana ara-pianakaviana miaramila
Miarahaba ny vady aman-dreny sy ny fianakaviana izay mitady fanampiana sy toerana azon'izy ireo antsoina hoe an-trano raha mbola miasa amin'ny tafika ny olon-tiany. Maha- Kolejy tia miaramila ambony, manolotra serivisy mitovy amin'izany ihany koa izahay ho an'ny veterans ho an'ny fianakaviany koa.
Na mila fanampiana ianao sy ny fianakavianao amin'ny fanampiana ara-bola, fikarohana asa, torohevitra momba ny fahasalamana ara-tsaina, na fanohanana ny tetezamita, dia hanampy anao rehetra izahay. Ny loharanom-pahalalana dia misy eny amin'ny campus sy ao anatin'ny fiarahamonina. Ireto loharanom-pahalalana ireto dia manolotra vahaolana saika ny zava-tsarotra atrehinao amin'ny maha-mpikambana anao taloha ao amin'ny tafika. Manolotra izahay fandaharam-pianarana manontolo andro sy fotoana fohy, maro amin'ireo azonao alaina an-tserasera. Ka na tsy azonao antoka aza hoe hafiriana ianao no eo amin'ny faritra misy anay, dia mbola azonao atao ihany ny mamita ny diplaomanao. Mifantoka amin'ny fahombiazanao, eto izahay hanampy anao hamorona ny fiainana eritreretinao.
Fandaharam-pianarana mafana indrindra ho an'ny mpianatra miaramila:
Mpitsabo mpanampy ara-batana
Fanampiana saram-pianarana ho an'ny mpianatra miaramila sy miaramila
Mampiasa ny tombontsoa avy amin'ny VA
Ao Hodges, fantatray fa zava-dehibe aminao ny mampiasa tsara ny tombotsoanao avy amin'ny VA. Hainay ny manampy anao hitantana ny fizotry ny fampiharana GI Bill® aorian'ny 9/11. Na afaka mahazo tombontsoa 100% ianao na ambaratonga tombony hafa dia manolo-tena hanampy anao izahay hahita vola betsaka araka izay azo atao amin'ny fanabeazana anao. Izany no mahatonga antsika mandray anjara koa amin'ny Fandaharana kofehy mavo natolotry ny Departemantan'ny raharaham-bahiny izay manampy amin'ny tetezana eo amin'ny banga eo anelanelan'ny 9/11 GI Bill® sy ny famatsiam-bola ilaina amin'ny fianaranao ambony.
Ny mpikambana mpikarakara asa mavitrika rehetra dia tokony hiresaka amin'ny Mpiasan'ny Serivisy fanabeazana na mpanolotsaina miaramila mba hahazo fankatoavana alohan'ny hisoratra anarana ao amin'ny Hodges University. Fidirana HU ary mpanolotsaina fanampiana ara-bola misy ihany koa hamaly ny fanontanianao.
Fihenan'ny saram-pianarana miaramila
Rehefa misafidy an'i Hodges ianao dia hahazo a fihenam-bidy amin'ny saram-pianarana $ 100 isaky ny ora indram-bola ho an'ny veterana izay tsy mahazo tombony amin'ny fanabeazana VA na fihenam-bidy fanampiny amin'ny saram-pianarana. Ny ankamaroan'ny veterana dia mahazo tombony amin'ny fanabeazana eo anelanelan'ny 40 sy 100 isan-jato.
Manolotra fihenam-bidy ho an'ny miaramila mavitrika ihany koa izahay. Anontanio anay ny fomba azonao atao 250 $ fihenana isaky ny ora adidy ny tahan'ny saram-pianaranay mahazatra.
Ho fanampin'izany, ny mpiasa VSC mahay anay dia hiasa mafy hanampy anao hahafantatra ny fanampiana ara-bola izay azonao atao mba hahafahanao mandray ny dingana manaraka amin'ny fanatanterahana ny Fahombiazanao. Izahay dia iray amin'ireo oniversite voafantina izay manolotra serivisy ho an'ny veterana miaramila, ary faly izahay eto fa hanompo anao rehefa mandray ny dingana manaraka amin'ny lalan'ny asa aman-draharahanao ianao.
Vola fanampiana ny saram-pianarana miaramila
Ny vola fanampiana ny saram-pianarana (TA) dia loharanom-pahalalana tsy manam-paharoa amin'ny fanampiana ara-bola azo alaina ho an'ny mpikarama mendrika. Ny tombotsoan'ny TA dia ampiharina amin'ny kaontin'ny mpianatra alohan'ny fanampiana ara-bola fanampiny azon'ny mpianatra raisina.
Entanina koa ny mpianatra hangataka fanampiana ara-bola hamaritana izay loharano hafa azony raisina. Mba hahazoana fanampiana ara-bola federaly, fanjakana ary andrim-panjakana (ao anatin'izany ny vatsim-pianarana maro), fenoy ny Application Free for Federal Student Aid (FAFSA). Raha te-hangataka fanampiana ara-bola dia mila mamorona ID Fianarana ho an'ny mpianatra Federal na FSA ID ianao ao amin'ny Tranonkala FSAID ary mandefa ny FAFSA ao amin'ny fafsa.ed.gov.
Aza manahy raha misavoritaka ny fanampiana ny saram-pianarana na fanampiana ara-bola. Ny mpiasa ao amin'ny Hodges 'Veterans Services Center dia eto hanampy anao miaraka amin'ny fanampiana Tuition anao ary hitarika anao amin'ny fizotry ny famatsiam-bola amin'ny fampianarana. Vitanao io!
Fanampiana ny saram-piaramanidina
Azonao atao ny mangataka fanampiana amin'ny saram-pianarana amin'ny Internet ao amin'ny Ivotoerana fanabeazam-pirenena Virtual Force. Tsy maintsy mamorona anarana mpampiasa sy teny miafina alohan'ny hidiranao amin'ny fangatahana TA amin'ny Internet.
Araho ireto dingana ireto raha te-hangataka TA.
Safidio ny antony fangatahana
Safidio ny anaran'ny sekoly
Ampidiro daty fe-potoana
Ampidiro ny fampahalalana momba ny fampianarana
Ampidiro ny saram-pisoratana anarana
Hamarino ny fampahalalana TA ary handefasa ny fangatahana
Aorian'ny fankatoavana ny fangatahanao dia hahazo fampandrenesana momba ny endrika TA nankatoavina ianao. Ny takelaka ankatoavina dia samy manana ny sonia nekena. Farany, mila mandefa kopian'ny takelaka TA nankatoavina ianao ao amin'ny Biraon'ny Cashier.
Mangataha fanampiana amin'ny saram-piaramanidina Air Force
Fanampiana ny saram-pianaran'ny tafika
Mangataka fanampiana amin'ny saram-pianarana
Aorian'ny fankatoavana ny fangatahanao dia hahazo fampandrenesana ianao avy amin'i GoArmyEd.
Raha tsy ekena ny fangatahana TA, GoArmyEd hanome antony ary koa safidy.
Farany, tsy maintsy mandefa kopian'ny takelaka TA nankatoavina ianao ao amin'ny Biraon'ny Cashier.
Mangataha fanampiana amin'ny saram-pianaran'ny tafika
Fanampiana ny saram-pianarana an-dranomasina
Mifandraisa amin'ny mpanolo-tsaina anao amin'ny oniversite Navy raha te hahazo torohevitra momba ny fanabeazana ianao ary hamaritana izay taranja angatahina amin'ny fanampiana ny saram-pianarana.
Fenoy ny taratasy fangatahana TA ary miverena any amin'ny Navy College Office ho an'ny fanodinana.
Tsidiho ny Tranonkala Navy College Raha mila fanazavana fanampiny.
Mangataha fanampiana amin'ny saram-pianarana an-dranomasina
Tsy maintsy mangataka sy mahazo alalana an-tsoratra ho an'ny TA ianao amin'ny alàlan'ny biraon'ny fanabeazam-pirenena alohan'ny fisoratana anarana.
Visit usmc-mccs.org Raha mila fanazavana fanampiny.
Mangataha fanampiana amin'ny fanampiana ny Corps Marine Corps
Fanampiana ny saram-pianaran'ny Coast Guard
Ny Ivontoerana USCG sy ny Ivotoerana Fampandrosoana ny fampianarana momba ny fanabeazana an-dranomasina amerikana dia mitantana ny fanampiana amin'ny saram-pianarana.
Ny Coast Guard Institute dia mankato ny Fampiharana TA ary mamoaka ny takelaka FA Manome lalana.
Tsy maintsy mandefa kopian'ny takelaka TA nankatoavina ianao ao amin'ny Biraon'ny Cashier.
Fitsidihana: ny Tranonkala Navy College na ny Tranokala tombony VA Raha mila fanazavana fanampiny.
Misorata anarana ho an'ny tombontsoa VA
Fomba hafa fanampiana ny saram-pianarana
Tsy ny fanampiana ny saram-pianarana ihany no loharanon'ny fanampiana ara-bola azon'ireo mpianatra miaramila sy veterana. Misy karazana fanampiana ara-bola maromaro, ao anatin'izany ny vola fanampiana sy ny vatsim-pianarana, ny fianarana-asa ary ny indram-bola.
Ny programa fanampiana ara-bola izay misy dia misy:
Famporisihana ny fanabeazana ara-tsosialy federal
Fanomezana fanampiana ho an'ny mpianatra any Florida
Fandaharam-pianarana Florida Bright Futures
Oniversite Hodges vatsim-pianarana
Fandinihana momba ny asa federaly
Fampindramambola ho an'ny mpianatra / indram-bolan'ny mpianatra mivantana
Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho ny Hodges U pejy fanampiana ara-bola.
Mianara momba ny fanampiana ara-bola HU
Dr. Peter Thomas Ivotoerana Serivisy momba ny veterans
Rehefa mitsidika ny Anjerimanontolon'i Hodges ianao dia manasa anao handany fotoana kely ao amin'ny Ivotoerana Serivisy Veterans (VSC) izay ahafahanao mahita samirery ny atao hoe fiainana any Hodges. Ny iraka ataon'ny Dr. Peter Thomas Veterans Services Center dia ny hanomezana tontolo iainana mandray sy mampahalala ireo veteranintsika sy ny fianakavian'izy ireo. Ao amin'ny Biraon'ny Serivisy Veteran (VSC), ianao dia hahazo fanampiana sy fampahalalana mifandraika amin'ny famatsiam-bola amin'ny fanabeazana ary koa torolàlana momba ny fanitsiana ny fiainan'ny mpianatra sy ny sivily. Na manatrika ny campus Naples na Fort Myers ianao, na an-tserasera aza, dia ho hitanao fa vonona hanampy anao ny mpiasan'ny Ivotoerana Veterans Services Center.
Nahoana no zava-dehibe tokoa ny VSC ao Hodges? Hitanay fa ny iray amin'ireo fanamby lehibe atrehin'ireo mpianatray vétéran dia ny fahatsapana ny maha-izy azy sy ny tanjony. Fantatray fa maro ny veterana no manadino ny firaiketam-po tsapan'izy ireo nandritra ny fanompoana ary fantatray fa manandrana mamantatra ny dingana manaraka amin'ny fiainanao ianao. Matokia, rehefa miverina amin'ny fiainana sivily ianao dia miaraka amin'ny orinasa tsara. Earl Hodges, ny anaran'ny oniversite, dia veterana ary naniry fatratra hanome fampianarana miavaka ho an'ireo veteraninay, ary maro amin'ireo mpitantana, mpampianatra ary mpiasa ao amin'ny Hodges U no veteran koa.
Ny mpiasan'ny Veterans Services Center dia eto hanampy anao amin'ity tetezamita sarotra ity amin'ny alàlan'ny fanomezana toerana ho an'ny fiarahamoninay miaramila hihaona sy hiresaka momba ny zavatra niainany. Ny fotoana hahafantarana mpikambana miaramila hafa dia manampy anao hahita ny fananana ilainao hahombiazanao amin'ny tanjonao amin'ny fianarana ambony.
Iza moa i Dr. Peter Thomas?
Nantsoinay ny ivon-toeranay momba ny serivisy ho an'ny veterans taorian'ny Dr. Peter Thomas, mpitati-baovao nandresy tamin'ny loka sy veteranina tamin'ny Ady lehibe II izay mponina tao Naples ihany koa tamin'ny 1996 ka hatramin'ny 2016. Tamin'ny 1943, taorian'ny nahazoany diplaoma tamin'ny lisea dia niditra tao amin'ny tafika amerikana izy ary nanompo miaraka amin'ny Division Infantry First amin'ny fampielezan-kevitra dimy eropeana. Thomas dia nahazo loka marobe tamin'ny asa fanompoana nataony, anisan'izany ny kintana mpiady dimy, iray isaky ny fampielezana, ny Bronze Star, ny Purple Heart, ny Unit French Croix de Guerre, ary ny Belgian Fourragère.
Nandany 13 taona i Thomas nandritra ny naha-vatofantsom-baovao ho an'ny CBS talohan'ny nialany hanohy ny asa fanadihadiana sy ny fitantarany momba ny asa maharitra. Nanohy ny asany fitantara i Thomas ary nanolotra asa am-peo ho an'ny dokambarotra fahitalavitra sy programa, fanadihadiana ary tambajotra ara-panatanjahantena toa ny ESPN. Izy aza dia nanome ny feo ho an'ny defibrillator ivelany automated (AED) an'ny Philips HeartStart.
Ny fitiavan'i Thomas an'ireo izay miasa amin'ny tafika dia tsy nitsahatra, ary tamin'ny 2004, Hodges dia nanome azy anarana hoe Humanitarian of the Year. Tamin'io taona io ihany dia voatendry ho Doctor of Humane Letters koa izy. Na dia nodimandry aza i Peter tamin'ny aprily 2016, dia mitoetra ao amin'ny vatsim-pianarana Peter sy Stella Thomas ny lovany, izay manome fanohanana ara-bola an'ireo veterana miaramila manohy ny mari-pahaizana licence na master.
Christin Olsen: Miady amin'ny veterana sy Proud Hodges U Grady
Inona ny fanamby lehibe natrehinao ary ahoana no fomba nandresenao izany?
“Ny fisotroan-dronono ara-pitsaboana dia tena sarotra tamiko ny nandresy. Nandany volana maro tany an-trano aho nahatsapa ho kivy sy nahatsiaro ho toy ny hoe tapitra ny fiainako tamin'ny 30 taona. Manana drafitra sy tanjona manokana amin'ny fiainako aho. Ny fisotroan-dronono ara-pahasalamana amin'ny asa tiako indrindra dia tsy iray tamin'izy ireo. Indray andro, raha mbola nanao akanjo damaody aho, tamin'ny mitataovovonana, dia hitako fa nanahaka ny zavatra nataoko ny zanako lahy ary tamin'izay no nahagaga ahy - tsy ity ilay vehivavy tiako hotadiavin'ny zanako lahy. Nanomboka nikaroka oniversite teto an-toerana aho ary nifankatia tamin'ny Hodges University. Tsy vita ny fiainako, fa manomboka fotsiny! ”
Midika inona aminao ny fahazoana diplaoma amin'ny Hodges?
“Midika zavatra be dia be izany. Mahatsiaro aho fa hisokatra varavarana be dia be ity ary hanampy ahy hahita asa vaovao tiako. Mahatsiaro ho faly amin'ny hoaviko sy izay rehetra ao an-tsainy aho. ”
Tohano ny veterans anay
Manolotra programa vatsim-pianarana izahay ary koa fandaharam-pianarana Veterans Center ho an'ny mpianatra miaramila sy ny fianakavian'izy ireo. Raha te-hanohana ireo veteraninay ianao dia kitiho eto raha handray anjara:
Fifandraisan'ny Ivotoerana Veterans
Phone: (239) 482-0019 Fax: (888) 320-7431
Mifandraisa amin'ny serivisy veterans